Nagarik Shukrabar - चुुनावमा कस्ता नेतालाई चुन्दै हुनुहुन्छ ?
शनिबार, ०५ माघ २०७५, ०७ : ३०
बिहिबार, २३ कार्तिक २०७४, १२ : ४१ | शुक्रवार
विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई चुनावले छोइसकेको छ । आफ्नो र योग्य प्रतिनिधि छान्नका लागि कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने राजधानीका चिया पसलदेखि होटेलसम्म बहस सुरु भइसकेको छ । चुनावका बारेमा के भन्छन् त सर्वसाधारण ?
भोट म चाहिँ नदिने पक्षमा छु किनभने देश बनाउँछु, बाटोघाटो बनाउँछु भन्ने नेताले सिन्धुपाल्चोक जाने बाटोमा मोटरसाइकलसमेत कुदाउन मुस्किल छ । गाडीको त के कुरा गर्नु ? यस्तो अवस्था आइसक्यो । मेरो आफ्नै मान्छे पनि चुनावमा उम्मेदवार भएको छ । खोई, कसैले पनि गर्नुपर्ने विकास नै गर्दैन । त्यसैले म नेताहरुलाई भोट नहाल्ने विचारमा छु ।
भोट सधैँ हालेकै त हो नि ! भोट दिएर केही भएन अहिलेसम्म । देश र जनताको पक्षमा कसैले केही कामै गरेनन् । त्यही भएर मैले भोट नहाल्ने कसम खाएको छु । नेता मोटाए, देश मोटाएन । हामीले भोट हालेको परिणाम के त ? गाउँ जस्ताको जस्तै छ । अब मैले केका लागि भोट दिने नेतालाई ? काठमाडौबाट मोरङ जान–आउन ५ हजार खर्च हुन्छ । खर्च गरे अनुसारको उपलब्धि के त ? कामभन्दा बढी भाषण गर्ने नेताहरु भएकाले मेरो भोट कतै नदिने विचारमा छु । भोट हाल्न जाने समयमा यतै काम गरिन्छ । कमसेकम बिहान–बेलुका खान त पाइन्छ ।
म चुनावमा घर जान्छु । मन परेको मान्छेलाई भोट दिन्छु । कसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा त गोप्य भयो, त्यसैले भन्नु भएन । हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई दिने हो । यही पाटीलाई भन्ने छैन । जसले गाउँलाई हेरेको छ, जनतासँग बसेर हरपल लागिपरेको छ म त उसैलाई भोट दिने हो । भोट दिनु त हामी नागरिकको जिम्मेवारी पनि त हो नि होइन र ?
भोट दिन म जादिनँ किनभने देशका लागि राम्रो काम गर्ने नै कोही छैन । जो पनि कुर्सीका मरिहत्ते गर्ने मान्छे मात्र देख्छु । तिनले जनताका लागि काम गर्लान् भन्ने लागेकै छैन । यो एक वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक फेरबदल भयो तर स्वार्थी नेताबाहेक कोही आएनन् । मेरो इलामको क्षेत्र १ मा पर्छ । त्यो पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको एरिया हो । भएर के गर्नु ? विकास भनेको शून्य जस्तै रह्यो । त्यै भएर केलाई भोट हाल्नु भन्ने लागेको छ मलाई त ।
भोट त हाल्ने हो । मेरो त नजिकै छ । यहीँ ललितपुर हो । म चाहिँ एमाले समर्थक हुँ । भारतले नाकाबन्दी गर्दा केपी ओलीले नझुकीकन त्यसको सामना गरे । अरु पार्टीका मान्छे भएको भए हजुर भनेर भारतको खुट्टा ढोग्थे होला । अहिलेको एमालेको घोषणा पत्र पनि ठीक छ र भाषणमा पनि राम्रै भनेका छन् । एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो घोषणापत्र निकालेको हुनाले मलाई ठीक लागेको छ । त्यस कारण यसैलाई भोट हाल्ने पक्षमा उभिएको छु । भोट नदिने भनेर बसेका मान्छेहरु पनि धेरै छन् । आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने बेलामा घरैमा बसेर त कहाँ हुन्छ ? जो चुने पनि राम्रो मान्छे चुन्नु पर्छ । यो चुन्न पाउनु आफ्नो मताधिकारको कुरा हो । कसैले पैसा दियो भने खल्तीमा राख्नुस् तर मन परेको मान्छेलाई मत हाल्नुस् भन्न पनि चाहन्छु ।
सोलुखुम्बु (लामा पढ्ने)
चुनावमा भोट हाल्न म सोलु नै जाँदैछु । जसले विकास गरेको छ, म उसैलाई भोट दिनेछु । मेरो सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका ४ हो । त्यहीँ गएर भोट हाल्ने योजना बनाएको छु । किनभने मत अधिकार भनेको जनताले पाएको अधिकार हो । त्यसको उपयोग त गर्नु पर्यो नि हैन ? गाउँका गरिब जनतासँग जो खटेर लागेको छ, म त उसैलाई भोट दिन्छु ।
प्रकाश थापा पुलामी मगर
देशमा रहेक किसिमको राजनीतिक समस्या छ । जसले देशको बारेमा सोचेको छ, नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ, उसैलाई भोट हाल्ने हो । बाटोघाटो र पानीको अवस्था नाजुक छ । यो सुधार गर्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको आभास भएको छ । नेपाली युवाको सीपलाई नेपालमा बाँड्न सक्ने नेतालाई चुन्ने हो । आफूमुखी भन्दा देशमुखी हुनुप¥यो । म हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई भोट दिने पक्षमा छु । जसले दलित, महिला, जनजाति, वृद्धलाई बढी प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको होस् ।
म गणतन्त्रवादी थिएँ तर दस वर्षको अन्तरालमा नेपालमा कुनै उपलब्धि भएन । नेताहरुले आफूखुसी काम गर्न थाले । देशका लागि केही गरेनन् । त्यसैले म राजतन्त्रको पक्षमा अहिले आएर उभिएको छु । देशमा अब राजा आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । म अहिले भोट नहाल्ने पक्षमा छु ।
‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ जितेर गर्छु भन्नेलाई होइन, बिना कुनै चुनाव जिती जनताको अधिकार, विकास र सामाजिक परिवर्तनको सिपाही हुने व्यक्तिलाई म चुन्छु । मधेस आनदोलनको योद्धा र सामाजिक क्रान्तिका नेता ओमप्रकाश सरार्फलाई साथ र समर्थन छ मेरो । इतिहास फेर्ने बेला आएको छ बुझ्नु भो !
कर्मठ नेता तथा पोलिटब्युरो सदस्य, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, मोरङ क्षेत्र न. ३ का बाम गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार अहिलेसम्म कुनै व्यवसाय संलग्न नभई जनताका पक्ष्मा लागिपरेका नेतालाई भोट हाल्ने पक्षमा रहको छु । देशप्रेमी युवा नेता भानुभक्त ढकाललाई विजयी गराउन लागिपरेको छु । जनताको पक्षमा सधैँ बोल्ने नेतालाई नै यो समयमा भोट दिने पक्षमा छु ।
काभ्रे (हाउस पेन्टर)
म कहिलै पनि भोट हाल्न गएको छैन । नेताले कहिल्यै जनताको पक्षमा काम गरेको देखेको छैन । कामभन्दा पनि खाने नेता बढी जन्मिए । कुन राम्रो काम गरेका छन् र मैले भोट दिने ? मैले भोटर लिस्टमा नाम छ तर भोट हाल्न जान कसले भाडा दिन्छ र ? भाउ कति बढेको छ, खोई नियन्त्रण गर्ने निकाय ? मलाई त नेतादेखि सारै रिस उठेर आउँछ ।
मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो । नोकरीमा भएका कारण धेरै दिन छुट्टी मिल्दैन तर भोट हाल्न चाहिँ मन छ । जुन नेताले जनताले काम गरेको छ, उसलाई भोट दिन मन छ । जसले जनतालाई राम्रो काम गर्दै आएको छ उसैलाई भोट दिने सोचमा थिएँ । नोकरीलाई छोेडेर जान मिल्दैन । यसपालि हाम्रै एक जना दाजु चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ । उहाँ राम्रो मान्छे भए पनि भोटको विषयमा भने हाम्रोभन्दा ’नि हाम्रोलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सिन्धुपाल्चोक, (व्यापारी )
जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको त हो नि ! आफ्नो दुःख आफैँले नगरी खान पाइने होइन । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कतिले शासन गरे र अहिलेसम्म के भयो ? अनि सात सालदेखिकै नेताहरु अहिलेसम्म शासन गर्नेहरु तिनै छन् । व्यवस्थामार्फत परिवर्तन भयो देश र जनताले के पायो ? तिनै पुरानाले शासन गर्ने अनि अब जनताले के आशा गर्ने ? जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । दूरदर्शी र नयाँ भिजन भएका नेता अहिलेसम्म आएका छैनन् । त्यसैले यो चुनावमा भोट हाल्ने मन छैन ।
हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई भोट दिउँ भन्ने भावना भएको मान्छे हुँ । स्वदेशमै केही गरौँ भनेर लागिपरेका नेतालाई भोट दिन जाँदैछु । जनताको भावना बुझेको र जनताको आवाज सुन्नेलाई रोजेको छु भन्नु पर्यो । हाम्रो सोलखुम्बुमा यातायात छैन, स्वास्थ्यका बारेमा कुनै नेताले चासो दिएको पाइँदैन । जुन नेतालाई मैले चुनेको छु उहाँले यो समस्याको समाधान गर्न लागिपर्छु भन्नु भएको छ । पक्कै पनि आशा छ, यो समस्याको हल उहाँले गर्नु हुनेछ ।